Sina GS malefaka sy maripana ambany P OF Shrink Film orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | GS PACK
GS Soft & Low Temperature Polyolefin Shrink Film dia karazana sarimihetsika mampihetsi-po avo lenta. Izy io dia manana toetra tsara rehetra amin'ny sarimihetsika P OF mahazatra mihena, Mandritra izany fotoana izany dia manana hery mihena ambany izy, toetran'ny fihenan-tsofina ary fikafika hafa ary fananana hafa. Izy io dia afaka manangona ireo zavatra malefaka, endrika hafahafa ary zavatra mora tohina. Ny maripana marin-tampona sy avo lenta dia mitovy amin'ny sary mihetsika PVC.
GS Soft & Low Temperature Polyolefin Shrink Film dia karazana sarimihetsika mampihetsi-po avo lenta. Izy io dia manana toetra tsara rehetra amin'ny sarimihetsika P OF mahazatra mihena, Mandritra izany fotoana izany dia manana hery mihena ambany izy, toetran'ny fihenan-tsofina ary fikafika hafa ary fananana hafa. Noho izany dia afaka manangona ireo zavatra malefaka, endrika hafahafa ary zavatra mora tohina izy io. Ny maripana tonga lafatra sy avo lenta dia mitovy amin'ny sary mihetsika PVC mihena. Ny fampisehoana shrinkage miavaka dia eo ambanin'ny 120 ℃. Mihena haingana ny tanjaka sy tanjaka tombo-kase ary fanoherana mahery vaika. Mandritra ny famonosana, ny fihenan-tsasatra dia mety hahatratra mihoatra ny 70%. Aorian'ny fonosana, dia manana molotra mafana miavaka sy mifono tombo-kase tombo-kase static koa izy. Ny sarimihetsika malefaka ataontsika dia miantoka ny fonosana azo antoka ary manome antoka ny fahombiazan'ny fonosana. Ny sarimihetsika malefaka ataontsika dia mifanaraka amin'ny karazana milina fanangonana kely rehetra miaraka amin'ny fampisehoana tena tsara. Indrindra amin'ny milina famonosana Auto-matic haingam-pandeha.
Sarimihetsika malefaka sy malefaka GS Polyolefin Shrink Film
hateviny Micron ASTM-D 374 15um 19um 25um
hakitroky g / cm3 ASTM-D 1505 0.91 0.91 0.91
Faharetana amin'ny sintona MD N / mm2 ASTM-D 882 95 95 95
Fanoherana ny ranomaso MD N ASTM-D 1938 0,87 1.1 1.2
Tombo-kase N / 15mm Q BT 23-58 12 14 16
Diameter anatiny santimetatra 3 3 3
Fanamarihana: MD (Làlan'ny masinina) ， TD (Toro lalana erany)
Horonantsary mampihena hafanana POF
Ny POF dia karazana horonantsary mampihena hafanana, ampiasaina amin'ny vokatra fonosana amin'ny endriny mahazatra sy tsy ara-dalàna. Noho ny fiarovana tsy misy poizina sy tontolo iainana, mangarahara avo, fihenam-bidy avo, fitomboan'ny hafanana, gloss avo, henjana, fanoherana ny ranomaso, manana ny mampiavaka ny fihenan'ny hafanana mitovy izy ary mety amin'ny fonosana haingam-pandeha haingana. Izy io dia vokatra azo soloina amin'ny horonantsary nentim-paharazana hafanana PVC. Ampiasaina be izy io amin'ny famatsiana fiara, vokatra plastika, fitaovana, boky, elektronika, board circuit, MP3, VCD, asa-tanana, sary sy vokatra hazo hafa, Kilalao, fanafody famonoana bibikely, kojakoja ilaina isan'andro, sakafo, kosmetika, zava-pisotro am-bifotsy, vokatra vita amin'ny ronono, fanafody, kasety ary kasety horonantsary ary vokatra hafa.
1. Mangarahara avo sy gloss tsara, izay afaka mampiseho mazava ny fisehon'ny vokatra, manatsara ny fahatsapana ny fahatsapana ary maneho ny avo lenta.
2. Ny tahan'ny fihenan-tsasatra dia lehibe, hatramin'ny 75%, ary tsara ny malefaka. Izy io dia afaka mamono izay endriny rehetra. Ary ny herin'ny fihenan'ny sarimihetsika miaraka amina ekipa telo sosona notsaboina tamina dingana manokana iray dia azo fehezina, izay afaka mamaly ny herin'ny fihenan'ny fonosana vokatra samihafa. Fitarainana.
3. Fahombiazan'ny welding tsara sy tanjaka avo lenta, mety ho an'ny fonosana automatique automatique, semi-automatique ary hafainganana.
4. Manana fanoherana mangatsiaka tsara izy ary afaka mitazona manovaova amin'ny -50 ° C tsy misy fifamohana. Izy io dia mety amin'ny fitehirizana sy fitaterana ireo entana fonosana ao anaty tontolo mangatsiaka.
5. Sariaka amin'ny tontolo iainana, tsy misy poizina, mifanaraka amin'ny fenitra US FDA sy USDA, ary afaka manangona sakafo. Ny akora fototra ao amin'ilay sarimihetsika famonosana hafanana telo sosona dia misy LLDPE (polyethylene ambany ambany), TPP (polypropylene copolymer ternary), PPC (polypropylene copolymer binary) ary additives ilaina toy ny Shuang Slip agents, anti -Agent mpanelingelina, agents antistatic, sns. Ireo fitaovana manta ireo dia fitaovana ara-tontolo iainana sy tsy misy poizina, tsy misy gazy poizina na fofona azo vokarina mandritra ny fanodinana sy ny fampiharana ny vokatra, ary ny fahombiazan'ny fahadiovan'ny vokatra dia mifanaraka amin'ny fenitra US FDA sy USDA, ary afaka ampiasaina amin'ny fonosana sakafo.
Famokarana dingana famoahana horonantsary fonosana hafanana mihena telo sosona vita amin'ny polyethylene ambany (LLDPE) sy ny polypropylene copolymer (TPP, PPC) ho toy ny akora fototra, manampy additives ilaina, ary namboarina tamin'ny co-extrusion blow molding. Ny fizotrany dia tsy mitovy amin'ny fizotry ny famolavolana nentim-paharazana. Noho ny fananana maharatsy ny fanjakana miempo PP dia tsy azo ampiasaina ny fizotran'ny famolavolana nentim-paharazana. Fa kosa, ny fizotran'ny bubble indroa dia ampiasaina, izay fantatra ihany koa amin'ny dingan'ny Pulandi eto amin'izao tontolo izao. Atsonika sy avoakan'ny extruders isan-karazany izy io, amin'ny alàlan'ny lohan'ny co-extrusion die natao manokana, noforonina ny horonantsary voalohany ary novonoina, ary avy eo nohafanaina ho an'ny fiakaran'ny vidim-piainana faharoa sy ny fivelarana hahazoana ny vokatra.
Famaritana ny vokatra fanovana lehibe
Sarimihetsika shrinkable hafanana miampy telo sosona dia azo novokarina tamin'ny famaritana isan-karazany arak'ilay fampiharana. Ny hatevin'ny ankapobeny dia manomboka amin'ny 12μm ka hatramin'ny 30μm. Ny hatevin'ny mahazatra dia 12μm, 15μm, 19μm, 25μm, sns. Ny fatra famaritana dia miankina amin'ny habetsaky ny fonosana. Fanoherana mangatsiaka Ny sarimihetsika fonosana hafanana mihena telo sosona dia mijanona malefaka amin'ny -50 ° C, tsy misy fahamendrehana, ary mety amin'ny fitehirizana sy fitaterana ireo entana fonosana ao anaty tontolo mangatsiaka. Fampisehoana ara-pahasalamana Ireo akora ampiasaina amin'ny horonantsary fonosana hafanana miisa telo sosona dia fitaovana tsy misy poizina avokoa ny tontolo iainana, ary ny fizotry ny fanodinana sy ny fampiasana dia madio ara-pahasalamana sy tsy misy poizina, mifanaraka amin'ny fenitry ny firenena FDA sy USDA, ary afaka ampiasaina amin'ny fonosana sakafo.
Fanovana prospek fampiharana
Ny sarimihetsika fonosana hafanana POF dia manana fampiasa betsaka, tsena malalaka ary manana tombony amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny tsy fanapoizinana. Noho izany dia nahazo fiheverana be dia be avy amin'ny firenena mandroso eto amin'izao tontolo izao izy ary nanolo ny sarimihetsika fonosana hafanana hafanana PVC ho vokatra lehibe amin'ny fitaovana famonosana hafanana. Ny famokarana ireo andiana vokatra eto amin'ny fireneko dia nanomboka tamin'ny tapaky ny taona 1990. Amin'izao fotoana izao dia misy mihoatra ny folo ny tsipika famokarana any Shina, izay fitaovana ampitaina avokoa, miaraka amin'ny fahafaha-mamokatra manodidina ny 20 000 taonina. Noho ny elanelana misy eo amin'ny teknolojia famonosanan'ny fireneko sy ireo firenena mandroso iraisam-pirenena, ny fampiharana ny andian-tsarimihetsika fonosana miisa telo sosona hafanana ao Shina dia mbola eo am-piandohana ihany, ary mbola tery ihany ny habaka fampiharana, voafetra amin'ny zava-pisotro, vokatra audio-visual, sakafo mahafa-po ary vokatra simika isan'andro isan'andro amin'ny faritra vitsivitsy, manodidina ny 2 ka hatramin'ny 50.000 ka hatramin'ny 30.000 taonina ny tinady isan-taona.
Endri-tsarimihetsika mampihena hafanana
Ny fitaovana ampiasaina amin'ny horonantsary mampihena hafanana dia sarimihetsika thermoplastic maro karazana. Tamin'ny voalohany, ny sary mihetsika PVC mihena no tena nampiasaina. Miaraka amin'ny fampandrosoana tsy tapaka ny fangatahana tsena, nihena tsikelikely ny sarimihetsika mihena PVC, ary ny PE, PP, PET, PVDC, POF ary sary mihetsika hafanana miompana multilayer hafa dia namolavola haingana ary lasa lohandohan'ny tsena. Ny horonantsary mampihena hafanana dia ampiasaina amin'ny varotra sy fitaterana vokatra isan-karazany, ary ny tena tanjony dia ny mampiorina, manarona ary miaro ilay vokatra. Ny sarimihetsika mihena dia tsy maintsy misy fanoherana ambony amin'ny puncture, fihenan-tsakafo tsara ary fihenan-tsakafo sasany. Mandritra ny fihenan'ny dingana, tsy afaka mamoaka lavaka ilay horonantsary. Matetika ny sarimihetsika mihena dia matetika ampiasaina any ivelany, ilaina ny manampy solontena anti-ultraviolet UV.
Manana malefaka avo izy, tsy mora vaky, fanoherana mahery vaika, fanoherana mahery vaika, fanoherana ny ranomaso, hery mihosin-kery, ary afaka manolo fonosana boaty. Ny tahan'ny fihenan-tsasatra dia lehibe, ary ny entana dia azo afehezina mafy aorian'ny fihenan'ny hafanana. Raha mihena hafanana ny kitapo mandalo PE (misokatra amin'ny faran'ny kitapo) dia afaka mampiakatra ireo entana ny faran'ny roa amin'ny vava, izay mahazaka 15KG ho an'ny fikirakirana mora. Manana mangarahara tsara sy fampitana hazavana 80% izy io. Izy io dia afaka mampiseho vokatra ary hampiroborobo ny vokatra tsy hita maso. Mandritra izany fotoana izany dia mampihena ny lesoka fizarana amin'ny rohy lozisialy ihany koa. Voaporofo amin'ny hamandoana, tsy tantera-drano ary porofon-vovoka, tsy vitan'ny hoe mahatratra ny vokatra fonosana fotsiny izy io, fa tsara tarehy koa ary miaro ny vokatra. Ny poizina, tsy misy tsirony ary tsy misy loto dia fitaovana fonosana ho an'ny tontolo iainana.
Fampiharana horonantsary azo hafanaina amin'ny hafanana PE: fanafody, zava-pisotro, rano mineraly, labiera, gorodona laminate, palletizing, akora fananganana, vokatra vy, vokatra vita amin'ny ronono, tavoahangy fitaratra, taratasy indostrialy ary fitaovana fonosana lehibe hafa, lahatsoratra, sns.
Juyin Plastic Packaging Products (Shenzhen) Co., Ltd. dia mpamatsy fonosana matihanina mampiditra R&D, famokarana, varotra ary serivisy. Ny vokariny dia ahitana fitaovana fonosana feno tontolo iainana, fitaovana sy fitaovana fonosana ary tsipika fanaraha-maso automatique fonosana. Izahay dia manana ekipa matihanina natokana ho an'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny fitaovana fonosana sy ny fonosana ho an'ny tontolo iainana. Izy io no manana sampan-draharaha misahana ny fikojakojana vokatra farany matihanina ao Shina, manome serivisy fikaonan-doha mandritra ny 24 ora.
Previous: Sarimihetsika GS Standard Polyolefin Shrink
Manaraka: GS Hot Slip Polyolefin Shrink Film
Sarimihetsika ambany kokoa
Suhu momba ny sarimihetsika Polyolefin
Temperature famonosana polyolefin
Mihena ny maripana sarimihetsika fonosana
Factory famolavolana mangarahara Polyolefin POF hafanana ...
Temperature famonosana polyolefin, Famonosana Polyolefin Pof Shrink, Mitete Film Pvc, Sarimihetsika Polyolefin Pof Shrink, Horonan-tsarimihetsika Vs Shrink Wrap, Mihena horonan-tsary horonan-tsary,